एक blockchain विकासकर्ता कसरी बन्न - Blockchain समाचार
Bitcoin, IČO, Mining, Cryptocurrency
मा खनन को संभावनाहरु 2018
जनवरी 30, 2018 व्यवस्थापक
एक blockchain विकासकर्ता कसरी बन्न
तपाईं आफ्नो cryptocurrency बनाउन सपना छ भने, स्मार्ट अनुबंध र blockchain आवेदन कसरी लेख्न सिक्दै, तर प्रोग्रामिंग बुझ्दैनन्, वा यदि एक लामो समय को लागि विकास गरिएको छ, तर केवल cryptocurrencies बारेमा र रिट्रेन चाहनुहुन्छ छन्, यो सम्भव छ. यस लेखमा, हामी तपाईंलाई भन्नेछु कसरी स्वतन्त्र प्रश्न अध्ययन गर्न, के ज्ञान उपयोगी हुनेछ र तिनीहरूलाई कहाँ फेला पार्न.
7 सर्वश्रेष्ठ Blockchain विकास प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम र प्रमाणपत्र
blockchain विकासको लागि आधार कस्तो आवश्यक छ?
यदि हामी प्लेटफर्ममा केही मा स्मार्ट अनुबंध को विकास बारे मा कुरा गर्दै, उदाहरणका लागि, Ethereum, त्यसपछि “आधार” आवश्यकता छैन. तपाईं खोज इन्जिन र एक सानो धैर्य प्रयोग गर्न मात्र क्षमता आवश्यक. आफूलाई, तिनीहरूले कोडिङ संग विशेष परिचित छन् मानिसहरूले सिर्जना गर्न सक्छ भनेर स्मार्ट अनुबंध ठीक गर्भधारण थिए. उठ्न सक्छ कि मात्र कठिनाई प्रशिक्षण सामाग्री को कमी छ, किनभने यो प्रविधि धेरै जवान छ.
यदि हामी हाम्रो आफ्नै blockchain विकास बारे मा कुरा गर्दै, त्यसपछि एक गम्भीर आधार आवश्यक छ. तर केवल यो पर्याप्त छैन.
लायक खरीद के ज्ञान छ
मुख्य कुरा कसरी प्रविधि काम बुझ्न छ. blockchain विकास मा सीमितता को सबैभन्दा प्रविधि को peculiarities सम्बन्धित छन्, जो केही प्रक्षेपण ढाँचाको प्रयोग अनुमति छैन. यो संग, विसर्जन चरण समयमा उत्पन्न पहिलो कठिनाइ सम्बन्धित छन्. तथापि, तपाईं प्रविधि नै समझ गरेपछि, स्मार्ट अनुबंध लेखन अब खडा हुनेछन् लागि कार्यक्रम भाषाहरूको एक मास्टर गर्न समस्या. साथै, म ध्यान दिएर पढ्दा सिफारिस सेताे कागज को cryptocurrency को, जो तपाईं स्मार्ट अनुबंध लेख्न जाँदैछन् आधारमा.
यो सम्भव विशेष पाठ्यक्रम लिन स्वतन्त्र वा राम्रो सिक्न छ?
को पाठ्यक्रम, कुनै पनि ज्ञान अब स्वतन्त्र खरिद गर्न सकिन्छ, कम्तिमा किनभने परियोजनाहरूको सबैभन्दा GitHub मा बाहिर राखे छन्. मुख्य समस्या प्राप्त ज्ञान को गति छ. एकातिर, त्यहाँ blockchain बारेमा जानकारी को धेरै छ, तर यो धेरै खोक्रो छ, त्यसैले अधिकांश समय यो डाटा फिल्टर जानेछन्. अर्कोतर्फ, तपाईं बस शिक्षक सबै कार्यहरू दोहोरिन एक खतरा छ, सबै कोड पुस्तकका प्रतिलिपि, तर तपाईं केहि सिक्न छैन. त्यसैले, म आत्म-अध्ययन तपाईं चाँडै आधारभूत ज्ञान र समानान्तर मा प्राप्त गर्न सक्छन् जहाँ पाठ्यक्रम संलग्न लिएर सिफारिस, उदाहरणका लागि, लक्ष्य सेट – एक विशेष परियोजना लागू गर्न.
के कार्यक्रम भाषाहरू आवश्यक?
हामी यो नयाँ कुरा सिक्ने लागि उपयोगिता को डिग्री गरेर कार्यक्रम भाषाहरू विभाजन गर्न कुनै अर्थमा बनाउँछ भनेर विश्वास. एक कार्यक्रमको भाषा निश्चित अवस्थामा लागि उपयुक्त छ कि केवल एक उपकरण हो.
सामान्य मा सिलिकन उपत्यकाका देखि ठूलो कम्पनीहरु त्यहाँ एक वा अर्को भाषामा विकासकर्ता रूपमा कुनै यस्तो कुरा हो. तपाईं प्रोग्राम गर्न सक्नुहुन्छ भने त यो एक ठूलो प्लस छ. तपाईं कसरी सही गर्न को समझ छ भने, वास्तुकला र प्रक्षेपण ढाँचाको निर्माणको आधारभूत सिद्धान्तहरू थाह अझ ठूलो प्लस छ.
एक शुरुवात विशेषज्ञ लागि उपयोगी स्रोतहरू
हामी सिफारिस पुस्तक विकासकर्ता Andreas एम. Antonopoulos. पनि, तपाईं cryptocurrency को सेतो कागज पढ्न आवश्यक, जो तपाईंले विकास गर्न जाँदैछन् आधारमा. तपाईं प्रविधि नै बुझ्न पछि, कागजात पढ्न गर्ने जाने. हामी तुरुन्तै सिफारिस छैन एक हजार र एक ट्यूटोरियल को कार्यान्वयन सुरु हुने, किनभने कारण प्रविधि पर्याप्त जवान छ भन्ने तथ्यलाई गर्न, मात्र विश्वसनीय स्रोत रूपमा मात्र आधिकारिक दस्तावेज सेवा गर्न सक्छन्.
तर कागजात अध्ययन गरेपछि, तपाईं सरल ट्यूटोरियल प्रदर्शन गर्ने जान सक्नुहुन्छ. कोड उदाहरण को लागि रूपमा, त्यहाँ एकदम केहि खुला स्रोत GitHub मा फेला पार्न सजिलो हो कि परियोजनाहरू छन्.
पनि अब विकासकर्ताहरूको लागि समुदाय छन्, तार च्याट, अनलाइन पाठ्यक्रम, समूह LinkedIn र यति मा, त्यसैले त्यहाँ एक समुदाय लागि खोज समस्या हुँदैन.
एक blockchain विकासकर्ता कसरी बन्न?
★★★7चोटी Blockchain विकास पाठ्यक्रम, Training and Certifications ★★★
लेखक: रिचर्ड Abermann
को IČO बजारमा कसरी परिवर्तन हुनेछ 2018?
2017 explosi देखे ...
हालै, जापान केन्द्रिय बैंकहरू र नियामकहरु लागि blockchain roundtable आयोजित
जापानको वित्तीय Se ...
Blockchain समाचार 15.07.2018
तारकीय मूल्य: ठूलो ...
अघिल्लो पोस्ट:Blockchain समाचार 30 जनवरी 2018
अर्को पोस्ट:Blockchain समाचार 31 जनवरी 2018
Blockchain समाचार 21.08.2018
Blockchain समाचार 20.08.2018
अनबक्स्ड नेटवर्क के हो? अनबक्स्ड –aMassive Market Brands are spending
पढाइ जारी राख्न »
जुन 19, 2018 व्यवस्थापक
पहिलो cryptocurrency को इतिहास
altcoins Bitcoin ब्लक श्रृंखला BTC क्लाउड खानी co छलफल coin कोइनबेस गुप्त cryptocurrencies cryptocurrency ethereum विनिमय hardfork IČO litecoin MA खान खानी नेटवर्क नयाँ समाचार मंच प्रोटोकल लहर पछि तार टोकन टोकन व्यापार वालेट